Isiqephu 24 - I-Airbnb
L'Anse-Saint-Jean, Quebec, i-Canada
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Pierre-Luc
U-Pierre-Luc Ungumbungazi ovelele
Isitudiyo esihle esincane esihlome ngokugcwele esitholakala ngaphansi kwemithambeka yokushushuluza e-Mont-Édouard, (i-ski-in / ski-out), ilungele abathandi bemvelo. Eduze kwedolobhana, izindawo zokudlela, izitolo kanye neSaguenay Fjord enhle kakhulu.
Le Condo itholakala esitezi esiphezulu endaweni eyi-16 unit complex. Ifakwe ngokugcwele, yonke into ikhona, okudingayo nje ukuthi ujabulele ukuhlala ongasoze wakukhohlwa. Iphansi elishisayo nendawo yomlilo yegesi ukuze uvuselele ubusuku bakho. 1 umbhede we-Murphy okabili nombhede owodwa (1) omncane ogoqwayo.
4.89 · 126 okushiwo abanye
Sise unyawo zokushushuluza eqhweni edolobhaneni alpine ka Mont-Édouard, ungakwazi bale midlalo zakho ozithandayo ezifana ekwehleni Ukushushuluza, unqamule izwe, i-snowboarding, Snowshoeing, entabeni noma umgwaqo ngebhayisikili, ukuhamba ngokwemvelo noma ebhukuda ihlobo. Ngaphezu kwalokho, eduze uzothola indawo yokuphumula ephumuzayo "Aux pieds d'Édouard".
Sihlala sitholakala emini noma kusihlwa ukuze siphendule imibuzo yakho.
UPierre-Luc Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 249174
Hlola ezinye izinketho ezise- L'Anse-Saint-Jean namaphethelo